Faka umbhalo kumfanekiso: Isifundo sendlela yokufaka umbhalo kumfanekiso | Creatives Online
Faka umbhalo kumfanekiso
Ngalo lonke ixesha kukho abaqulunqi abaninzi kunye nabaqulunqi abayila iipowusta okanye izibhengezo apho isicatshulwa kunye nomfanekiso uba ngabalinganiswa bendawo. Akumangalisi ukuba zizinto ezimbini zegraphic ezikhoyo kakhulu kwicandelo kwaye ezingazange ziqatshelwe naphi na apho ziye khona.
Kule posi, siza kukufundisa indlela entsha eya kukunceda uqhubeke uyila iiprojekthi ezinomdla., apho unokufumana ulwazi olutsha lwezinto ezahlukeneyo zegraphic ezikhoyo kwihlabathi loyilo lwegraphic kunye nemiba yalo eyahlukeneyo.
1 I-.TXT ifomathi
2 Faka umbhalo kumfanekiso
3 Ezinye izixhobo zale nkqubo
3.2 Umhleli weShutterstock
3.3 iStock Umhleli
3.4 Uyilo lweWizard
Ngaphambi kokuba sikwazise ngento eza kuba ngumxholo weposti kunye nesifundo, kubalulekile ukuba uyazi enye ifomathi esiza kuyibonisa kuwe ngalo lonke eli candelo.
Okokuqala, kufuneka kongezwe ukuba le fomati iyifomathi efana nayo nayiphi na enye kodwa ineempawu ezahlukileyo. Iifayile ezinolwandiso lwefayile .txt inokuqaliswa kuphela ngezicelo ezithile. Iifayile ze-Txt zinokuba ziifayile zedatha kunamaxwebhu okanye imithombo yeendaba, nto leyo ethetha ukuba ayenzelwanga ukubonwa kwaphela.
Amaxwebhu okubhaliweyo okungenanto agcinwe ngefomathi ye-TXT ingenziwa, ivulwe kwaye ihlelwe kusetyenziswa uluhlu olubanzi lweenkqubo zokucwangcisa amagama kunye nokuhlela izicatshulwa eziphuhliswe kwiinkqubo ze-Linux, iikhompyutha kunye ne-Windows-based Microsoft Mac platforms.
Umxholo wezi .txt plain ASCII iifayile zokubhaliweyo kukuba zinokugcinwa njengamaxwebhu .txt kwiifayile zobungakanani obuncitshisiweyo. Phantse zonke ii-smartphones zidityanisiwe kunye nezicelo ezibonelela ngoncedo lokuhambelana ukufikelela kumxholo wezi fayile zeTXT, ngelixa. Isixhobo seAmazon Kindle sinokusetyenziselwa ukuvula kwaye ujonge umxholo ogcinwe kuxwebhu lokubhaliweyo.
Ezona zicelo zidumileyo zeMicrosoft Windows zokuhlela okubhaliweyo ezifana neMicrosoft Notepad inokusetyenziselwa ukwenza iifayile zeTXT, kwaye le nkqubo inokusetyenziselwa ukugcina la maxwebhu acacileyo abhaliweyo kwiHTML kunye neefomathi zeJS phakathi kwezinye.
Ukuzisa ifayile ye-.txt okanye nayiphi na enye ifayile kwiPC yakho, iqala ngokucofa kabini kuyo. Ukuba unxulumano lwakho lwefayile luqwalaselwe kakuhle, isicelo esifuna ukuvula ifayile kule fomati siya kuvula. Kusenokufuneka ukhuphele okanye uthenge usetyenziso oluchanekileyo ukuze ufikelele kwifayile ye-.txt.
Nje ukuba uyazi ngakumbi ngale fayile, siza kukubonisa ezinye iindlela ezikhoyo ukuze ukwazi ukufaka umbhalo kumfanekiso. Kukho iindlela ezininzi, zonke zahluke kakhulu kwaye zahlukile, kodwa sikubonisa eyona ilula kakhulu.
Njengoko besesitshilo ngaphambili, siza kukubonisa eyona ndlela ilula. Ukwenza oku kuyimfuneko ukwenza kwiMicrosoft.
Kwi-Microsoft Office, sebenzisa i-WordArt okanye ibhokisi yokubhaliweyo ukongeza umbhalo phezu kwefoto. Ungahambisa ibhokisi yeteksti okanye iWordArt ngaphezulu kwefoto emva koko, ngokuxhomekeke kwinkqubo yeOfisi kaMicrosoft oyisebenzisayo, ujikelezise isicatshulwa ukuze ilingane ngcono ifoto.
Olunye ukhetho lokongeza umbhalo phezu kwefoto kukuzoba ibhokisi yokubhaliweyo, chwetheza okubhaliweyo okufunayo kwibhokisi yokubhaliweyo, emva koko wenze imvelaphi kunye nolwandlalo lwebhokisi yokubhaliweyo lubonakale. Ungafomata okubhaliweyo kwibhokisi yokubhaliweyo, ngendlela enye ofomatha ngayo umbhalo naphi na kwiOfisi. Olu khetho luluncedo ngakumbi xa ufuna ukongeza ngaphezu kwegama elinye okanye amabini kwifoto yakho.
Ezinye izixhobo zale nkqubo
Okulandelayo, sikubonisa ezinye zezixhobo ezinokuba luncedo kuwe kwaye ezibonelela ngokulula ngakumbi xa usebenza nazo.
ICanva ikukhokela kuthotho lwezifundo ezilula eziya kukwenza uzive ngathi ungumyili kungekudala. Xa ulungele ukwenza into ekhethekileyo ngemifanekiso oyifumeneyo, eyona ndlela ilungileyo yokuqalisa kukufundisa ngeCanva. malunga nophawu lwefonti, umbala, ukhetho kunye nokudityaniswa, kunye nezihluzo zeefoto, imvelaphi, kunye neemilo. Oko uya kufunda kuya kukunceda udibanise iifoto zakho kunye nesicatshulwa kwaye ufezekise umphumo oyifunayo.
I-titan yeefoto zesitokhwe, iShutterstock ayilothala leencwadi elikhulu lemifanekiso yesitokhwe. Kwakhona inikeza izixhobo zokuyila ezipholileyo ezinje ngoMhleli weShutterstock, umhleli wemifanekiso okwi-intanethi olula ukusebenzisa oko kwenza uhlelelo olulula ngokukhawuleza kwaye lunomtsalane.
Ungayiqhuba ngokuthe ngqo kwiphepha lemifanekiso yekhathalogu, kunye nakwindawo yabo, phantsi kwethebhu yezixhobo. Unokusebenza ngeefoto zozibini zeShutterstock, ude uqale ngokujonga i-watermark, kwaye ugcine ngokuzenzekelayo lonke uhlengahlengiso njengeefoto ezinokulungiswa okuphezulu xa uthatha isigqibo selayisensi, kunye nemifanekiso yakho usebenzisa inqaku lokulayisha.
Ukongeza isicatshulwa kwiifoto zakho kulula kakhulu, kwaye Uneentlobo ngeentlobo zezimbo zefonti kunye nokucetyiswa kwendibaniselwano, imibala kunye nobukhulu, kuquka ubungakanani obusetwe kwangaphambili besihloko, izihlokwana, kunye nokubhaliweyo. Idityaniswe nomsebenzi wokusikwa kunye nohlengahlengiso, izihluzi, iziphumo kunye nezinto eziqhelekileyo, unokwenza imifanekiso ekhethekileyo ngokuqhwanyaza kweliso. Ngaphandle koko esi sixhobo siza kunye neqela leetemplates ezilungele ukusetyenziswa.
Umthombo: Isoftware esebenzayo
Ithathwa njenge-arhente edumileyo yokufota iStock, kwaye inika abathengi bayo umhleli wemifanekiso ekwi-intanethi ukuze benze iifoto ezikuqokelelo lwabo ngokucofa okumbalwa. Inephepha layo, kwaye unokukhangela imifanekiso kwikhathalogu yayo ngqo kumhleli. Nceda uqaphele ukuba esi sixhobo sifumaneka kuphela kwimifanekiso ye-iStock.
I-iStock Editor kulula ukuyisebenzisa, awudingi naziphi na izakhono zoyilo ukuze usebenze nayo. Yenza ukuba kube lula kakhulu ukongeza isicatshulwa kwimifanekiso, ikunika iibhokisi zeteksti ezinokwenziwa ngokwezifiso kwiimilo ezahlukeneyo kunye nesitayile, kunye nokhetho olubanzi lweefonti, imibala kunye nobukhulu. Phakathi kokhetho lokuhlela kukho kwakhona: Iifomati zokusetwa kwangaphambili ezaziwayo, ubungakanani besiko, ukusika, izihluzi, iilogo kunye nemizobo.
Ubugqi bokwenyani boHlelo loMfanekiso, i-DesignWizard ngumhleli wemifanekiso ochwepheshile we-intanethi, ophuhliswe yiWaveBreak Media, Inkampani yokuvelisa iifoto kunye nevidiyo eyazi yonke into ekhoyo malunga nokuhlelwa kwemifanekiso. Isixhobo sayo sibonelela ngeempawu zokuhlela ezisisiseko, ukusuka ekucupheni nasekuguquleni ubungakanani kwakhona kwizihluzi, ukwaleka okubhaliweyo, kunye neemilo. Bade banento yokuhlela ividiyo. Ungabhalisa, wenze uyilo kwaye ugcine, ukhuphele kwaye wabelane ngazo simahla, kodwa ikwabonelela ngenguqulo yeprimiyamu enokugcinwa okongeziweyo kunye nomxholo okhethekileyo.
Umhleli iqulethe iitemplates ezininzi kunye nobungakanani obusetwe kwangaphambili kwimidiya yoluntu, ithala leencwadi elizele ziifoto zobuchwephesha, iintlobo ngeentlobo zeefonti onokukhetha kuzo, iseti yezihluzi kunye neziphumo onokuzisebenzisa kwimifanekiso yakho. Unako kwakhona ukulayisha eyakho imathiriyeli kwaye yonke into inokwenziwa ngokwezifiso. Ujongano lomsebenzisi lulula kakhulu, kwaye bakwanazo nezifundo ezintle ezikukhokelela kwimisebenzi yayo ngendlela ye-didactic.
Ukongeza umbhalo kwimifanekiso kulula kakhulu. Unokukhetha itemplate kwaye wenze okubhaliweyo ngokwezifiso, okanye usebenzise iqhosha lokubhaliweyo ukutsala indawo yokubhaliweyo naphi na apho ufuna khona, ukhethe kwakhona ifonti, ubungakanani befonti, umbala kunye nezinye iisetingi eziphambili, kwaye zonke ngaphantsi komzuzu omnye.
Oku kumnandi-iifonti ezintle, iimbono ezininzi, kwaye kulula ukuyisebenzisa kangangokuba uya kufuna ukongeza isicatshulwa kwimifanekiso ngalo lonke ixesha. NjengeCanva, iBeFunky ibonelela ngezifundo eziya kukukhuthaza ukuba ungasebenzisi kuphela ukongeza imisebenzi yayo yokubhaliweyo, kodwa kunye nezinye izixhobo zakhe: i-lipstick, i-exposure kunye nomnyama. UBeFunky uthetha noluntu Umenzi nge-DIY poster tutorials, izimvo zobugcisa, kunye neetemplates zekhadi lokubulisa. Uya kufumana i-assortment ebanzi yemithombo apho Unokwenza ngemibala, iikhonto, ukungaboni kunye nobungakanani obufunayo.
Asikwazanga ukuthi ndlela-ntle kwesi savenge ngaphandle kokukubonisa izixhobo ezinokwenza umsebenzi wakho ube lula. Kunjalo ngoba. Ukufaka isicatshulwa kumfanekiso ngumsebenzi olula kwaye nanamhlanje, kukho abaguquli abakwenzayo kunye nokuyilwa ngokuzenzekelayo.
Yiyo loo nto, ukuba ufikile apha, sicebisa ukuba uqhubeke uphanda kwaye ufunde ngakumbi malunga nezibonelelo kunye nofikelelo esinokulufumana. Lixesha lokuba uyile iiprojekthi zakho zokuqala kwaye udlale ngezixhobo ezahlukeneyo kunye nezinto zegraphic esikunike zona.
Fumana umfanekiso olungileyo kunye nesihloko esihle kwaye uqhubeke wenze iprojekthi yakho yokuqala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Faka umbhalo kumfanekiso
Indlela yokunciphisa umfanekiso kwisangqa